RAJADII LA HELAY !! Qalinkii Aweys Codeey
Friday, June 22nd, 2018 - 15:44:25
Sunday September 10, 2017 - 12:22:08 in Wararka by Kubad Bile
In badan oo bulshadeenna ka mid ah gaar ahaan intii bar baartay wixii ka dambeeyay 1990kii farxadda waxaa uga badnaa murugada iyo mahadhooyinkii ay ku rebeen dagaalo wajiyo badan ah oo isu dhii dhiibay iyada oo midba kan xiga aan looga alla baryin in waqtiga xigaaa uu u samaad.
wixii ka horeeyay 2011kii Magaalada Muqdiaho dadkeeda oo lagu qiyaaso tiro malaha 3milyan ku dhow waxa ay ku waa bariisanayeeen Daryanka mdaafiicda qof walba oo ku noolna marka uu gurigiisa ka baxayo qiyaasta nolosha uu heeysto waxaa ka badnaaa geerida oo haddii uu bad baado isaga waxaa hubaal ahayd in ehel ama saaxiib geeridiisa loo soo warinayay.
Xaaladdaasi waxaa ka dhashay in rajadii caasimadda iyo dhammaan wax walba oo aas aas u ahaaa nolosha meesha ay ka baxaan.
Dhalinyarada oo madadaallada ay uga dhigantahy shey sinnaba aan looga maarmin ayeey duruufta ku kaliftay in sida duqowda waqti iyo waayo wacan isku soo qaataay ula noolaadan Waxa loo wariyana ay noqoto in ay ayaan daran yihiin oo bari samaadkii aysan naaiib u yeelan.
Hayeeshe waxaas oo dhan waxan ku iloobay markii caawa abbaaro 9:00 Fiidnimo meel hareerta waddada maka Al_Mukarama ah aniga iyo saaxiibadeyda mar qura bidix iyo midig ay innaga baaseen Dhalinyaro tiro ahaan ka kooban 20 oo ay ku jiraan gabdho mindhaa kabihii ciidda loo iibiyay laba toddobaad ka hor gacmaha ku wata.
Halka wiilashana saraawiisha kor ugu xeeydan yihiin Dhalinyaradu oo si kal sooni ay ku jirto uga sheekeysanayay Cayaar ku badda cagta ah ayaa iyaga oo aan hadalka iska sugeeynin is dhaaf dhaaf sanayay muuqaal maskaxeed kii cayaarta ay ku reebtay iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in Cayaar aan khiyaaali ahayn oo shaashad laga daawaneeyn xilli habeeyn ah ay ku daawadaan muqdisho Waliba iyaga oo lugeeynaya dhowr Degmana isaga kala gooshaya.
Tani waxa ay iiga dhigneyd in wixii bari samadkii la isaga sheekeyn jiray in hadda bidhaantooda la hayo.
Haddaba Waa Horumar malaheyga ay fiicnaan lahayd in siyaasadda laga fogeeyo.
W/D: Aweys Xasan Maxamed ( Aweys Codeey)
Makula tahay in aad la wadaagto saaxiibadaa? (share dheh)